Ungahamba kanjani ezithende zakhe?
Ngaso sonke isikhathi, zonke izintombi ekuphileni kwakhe, zibhekane neqiniso lokuthi akakwazi ukuhamba ngezintethe. Ukubona kusukela kusikrini se-TV, njengamamodeli ahamba ngokukhululekile ku-catwalk ezithende eziphakeme, kubonakala sengathi lokhu akuyona into eyinkimbinkimbi. Kodwa-ke, kanye okokuqala okokuqala "ekuphakameni", le nsikazi inamangaza ukuthi imilenze yakhe ikhohlise ngamadolo ngesinyathelo, ingemuva kunzima ukugcina iqondile, nokududuzeka nokulula ngokujwayelekile akukwazi ukusho. Ngenhlanhla, ukufunda umthamo ondizayo, onomusa kungase kube ngokushesha, ube nemithetho embalwa elula.
Ukuhamba ngezithende eziphakeme kahle, ngokushesha futhi kalula
Ngakho-ke, bezibuza ukuthi kuhle kangakanani ukuhamba ezithendeni zakhe, kufanele kuqondwe ukuthi umuntu kufanele aqale ngokumiswa. Kuyinto ebuyele emuva, ikhanda eliphakanyisiwe ngokuziphakamisa kanye nesikhwama sobukhosi - isigamu sempumelelo kulokhu, kuphela ekuboneni kokuqala, indaba enzima. Ukuqala indlela yakho ezithendeni, intombazane akufanele isheshe. Ngokuphambene nalokho, kudingekile ukuba ungasheshi, kodwa kuqinisekile, ukuzama, ukuze ubude besinyathelo singadluli ubude bonyawo. Akufanelekile ngenkathi uhamba ngesimiso sokuqhafaza; kungcono kakhulu uma ukunyakaza kwenziwa cishe emgqeni ofanayo. Ukuphuza okuncane, okulungile ezindabeni eziningi kuxazulula enye inkinga evamile - indlela yokujwayela ukuhamba ngezintethe. Ukusebenzisa ezinyathelweni futhi ekuqaleni ukulawula ukunyakaza kwakhe, le nsizwa encane ngeke ibe nesikhathi sokubona ukuthi lokho okwakubonakala kuwukusebenza okuqinile kwemithetho izolo kwakumkhuba nje.
Ukuze uqonde ukuthi kuhle kangakanani ukuhamba ngezintethe, kunconywa ukuthi:
Thuthukisa ukuma okulungile bese uyeka ukunqamuka. Kudingekile ukuba ube emuva eduze nodonga olugqinsile, uthinta amaphuzu amane: ngemuva kwekhanda, amahlombe, amahlombe, izithende. Yile ndawo eqondile yomzimba okumelwe ibonwe lapho ihamba.
Zama ukuqinisekisa ukuthi amasokisi esitebhisini wawunjengokungathi uqondiswa kancane ngaphandle, kodwa hhayi futhi, ukuze ungabonakali ubuqili. Lesi sincomo sibaluleke kakhulu kumantombazane athambekele ekukhutheni lapho ehamba.
Isinyathelo sokuqala esithende bese uhamba ngezinyawo. Amantombazane amaningi angazi ukuthi ahambe kanjani ezithende zabo, kuqala afika emlenzeni noma ngokushesha kunyawo lonke, ngenxa yokuthi amadolo aguqa, futhi ukuhamba kubonakala kungenakwenzeka futhi kungathandeki.
Abathandi bokuhamba okusheshayo kuzodingeka bathuthukise imisipha yomlenze futhi bahlanganyele ekuzivocavoca umzimba okhethekile. Ngakho-ke, abathandi bezemidlalo abakhuthele bayazi ukuthi bahamba ngokushesha kangakanani izithende zabo futhi babhekane nalo msebenzi kalula, ngoba imisipha eqhumayo inikeza amandla okulwa nanoma yikuphi ukuphakama.
Izizathu zokwenqaba izithende
Inkulumo ethi "Angazi ukuhamba ngezintendeni" ingabangelwa nje kuphela ukungabi khona komkhuba, kodwa nangezici ezithile zomzimba. Isibonelo, izinkinga zomgogodla, ukuphakama okukhulu kwezinyawo, imivimbo ye-varicose kanye nezinye izici ezithile ngezinye izikhathi kubangela ukungathandeki okukhulu kumfana osemncane obeka izicathulo eziphezulu. Kulesi simo, izicathulo ezinjalo kufanele zishiywe futhi zithande okukhethwa kukho kwi-platform engaphezulu kakhulu.
Amanye amantombazane amancane athi asamahloni ukuhamba ezithendeni zabo ngenxa yokukhula kwabo okuphezulu. Nokho, ukwesaba ukubonakala okuphakeme akusilo kufanele kube yisithiyo ekudalweni kwesithombe esivumelana ngengubo enhle, okudinga ngempela "pair" yezicathulo ku-hairpin. Kulokhu, akudingekile ukukhetha ukuhluka okuphezulu kakhulu, ngoba namuhla kunezicathulo eziningi zezintombikazi ezinhle ekuphakameni okuphakathi.
Enye inkinga evamile, evamile ikakhulukazi kwabesifazane abancane, abangajwayele izinwele zezinwele futhi isikhathi eside behamba ngezicathulo zezemidlalo, imisindo elula: "Ngikhohliwe ukuthi ngihamba kanjani ezithende zakhe." Ukuze uzizwe ukhululekile futhi, kuzodingeka usebenzise, ​​mhlawumbe ngisho nasekhaya ezicathulweni zakho ozithandayo futhi nencwadi ekhanda lakho. Izinsuku ezimbalwa zokuzivocavoca okunjalo - futhi ikhono lizobuya ngokuqinisekile.
Amagqabha aphansi abesifazane abanjwe
Ukuqoqa izicathulo uCarlo Pazolini
Isigqoko sezimvu ezimhlophe
I-waistcoat ehlanganisiwe - ukuthi yini okufanele ugqoke lesi sici esithakazelisayo sekhabethe labesifazane?
Izindebe ezivela esikhwameni semvelo
Ungathwala izicathulo zesikhumba?
Izigqoko ezide kwabesifazane abakhulelwe
I-pike cutlets - iresiphi
Yini okufanele ugqoke ijaji labesifazane?
Indlela ukupheka ubhontshisi Bechamel?
UCypherus: ukunakekela ekhaya
Red Hill - izimpawu, amasiko, amasiko
Ukuguquka kokukhula: Iyiphi imfihlo ye-eyelashes ende naleyo?
Umthandazo ngomsebenzi wabangcwele bama-Orthodox
Izingubo zeHerve Leger
Incwadi yokuphupha ingane, izingane ziphupha ngani?
Izimpawu zokuntuleka kwe-magnesium emzimbeni wesifazane
Ikhanda elivela ku-beaver
Indlela yokuzimela yomuntu siqu emfundweni
Igumbi lokuhlala loft
Ukuhlolwa kwe-DNA kwezingane ezisekhaya
Yini okudingeka udle ngemuva kokuqeqeshwa?
I-dissociative identity disorder - izimpawu kanye nokwelapha
I-Collagen Face Mask
Iziphuzo ze-Suede zasebusika - yini okufanele uzigqoke nokuthi ungayinakekela kanjani amabhuzu e-suede ebusika?
Indlela yokupheka i-zrazy nge inyama enobisi neqanda?